China Now Bottle Type Counter-flow Cooling Towers Manufacturer and Supplier | Yubing
A na-agbanye mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ ka ọ dị elu nke ụlọ elu jụrụ oyi site na pipụ. A na-ekewa mmiri a ma kesaa ya n'elu ikpo ọkụ ọkụ ọkụ site na nkesa mmiri na-erughị ala.
Ndị na-agba ume na-efegharị, ikuku ọhụrụ na-abanye na ngalaba dị ala nke ụlọ elu na-emeghe jụrụ ma gbanahụ site na ngalaba nke elu mgbe ewechara ya ọkụ ma jupụta ya site na ịgafe n'elu mmiri mgbanwe mmiri.
N'ihi esemokwu dị n'elu ala, n'ihi mgbanwe mgbanwe, mmiri na-agbasa n'otu ụzọ, dara ala dum dị elu. A na-amụba elu mgbanwe ahụ.
Mmiri ahụ, mere ka ọ dị mma maka ikuku a na-amanye ya, dabara na bezin ahụ nwere mmasị na ala nke ụlọ elu ahụ. Mgbe ahụ, mmiri ahụ na-amịpụta site na nza. Ndị na-ekpochapụ ihe ndọkpụ dị na ikuku ikuku na-ebelata ọghọm ịpụpụ.
Lọ elu karama ahụ na-agba agba mmiri na-agba ume na-arụ ọrụ nke ọma iji na-ekesa mmiri na-agbanye ọkụ n'ime ụlọ elu ahụ. Nke a bụ ihe kasị ot na echekwa mbụ ọgbọ jụrụ ụlọ elu ebe ọ bụ na ịdị adị nke jụrụ elu. Faiba glaasi mesikwuru Polyester (FRP) casing bụ okirikiri ekara otú iwepu pụrụ iche n'ọnọdu chọrọ na-adịghị emetụta ebe nile ikuku ifufe. Ihe nlereanya a dabara adaba maka obere mkpa jụrụ oyi, malite na 5 HRT (okpomọkụ jụrụ ton) na 1500HRT. Nke a na usoro jụrụ ụlọ elu ndị kwesịrị ekwesị n'ihi na izugbe HVAC ngwa na iche iche n'ichepụta usoro jụrụ.
Akwa arụmọrụ na arụmọrụ
Fechaa & inogide
Ala mkpọtụ nhọrọ dị
Nke gara aga: Ihe eji abanye n'ime ulo iji nweta ike, HVAC buru ibu na ulo oru mmeputa
Osote: Lọ Nche Na-eme Ka E Nwee Obi withtọ na Redị Na-ahụ Anya
ụlọ elu jụrụ oyi na-azọpụta
elu arụmọrụ jụrụ ụlọ elu
Gburugburu karama ụdị jụrụ ụlọ elu